Askar DF oo Toogasho lagu fuliyay
21 Feb 21, 2013 - 12:32:35 AM
Maxkamada Ciidamada DF ayaa xukun dil ah ku fulisay 3-askari oo ka tirsan ciidamada DF, kuwaasoo laba ka mid ah ay isla dhasheen, halka midka kalena uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada Milateriga Somalia.
Askartan ayaa la xukumay sanadkii hore kadib markii lagu helay inay dileen dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidamada DF, waxaana toogashadan ay noqonaysaa tii labaad oo lagu fuliyo Askar tan iyo markii uu sanadkan cusub dhashay.
Gudoomiyaha Maxkamada Darajada 1-aad ee Ciidamada DF Col. Liibaan Cali Yaroow ayaa sheegay in askartan la toogtay ay ahaayeen kuwo horay loogu xukumay dil toogasho, lana dili doono askari walba oo lagu helay inuu si aan macno lahayn u dilo dadka shacabka ah iyo askarta kale ee las haqeynaysa.
“Maxkamada Ciidamada DF waxaa ka go’an inay toogasho ku fuliso askari kasta oo dil lagu helo. Sidoo kale waxaa la toogan doonaa qof walba oolagu xukumo dil toogasho, taasoo dambi lagu helo” ayuu yiri Gen. Xasan Maxamed Xuseen [Mun-gab] oo warbaahinta kula hadlay goobta uu dilku ka dhacay.
Dadweyne badan iyo Mas’uuliyiin DF ka tirsan ayaa ku sugnaa goobta uu ka dhacay dilka, iyadoo aysan ahayn markii ugu horeysa oo Maxkamada ay dil noocan oo kale ah ku fuliso askar dowlada ka tirsan.
Askarta la toogtay ayaa laba ka mid ah oo walaalo ah ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Cabdulaahi Cumar Katiir iyo Cabaas Cumar Katiir, kuwaasoo da’doodu ahayd 26 iyo 28 sano, waxaana lagu helay inay toogteen laba qof oo shacab ah oo midkood uu dhagool ahaa.
Labadii sano ee ugu dambeysay ayaa waxaa Muqdisho ka dhacayay dilal toogasho oo lagu fulinayay ciidamo ka tirsan DF, kuwaasoo lagu helayinay geysteen dilal iyo kufsi, iyadoo tani ay yareysay dilalka aan macnaha lahayn oo ka dhacayay Muqdisho.